Inona no lanjan'i Chandler Hallow? Jery ​​todika ny haren'ny mpiasan'i MrBeast - Pop-Kolontsaina
Inona no lanjan'i Chandler Hallow? Jery ​​todika ny haren'ny mpiasan'i MrBeast
Chandler Hallow dia YouTuber malaza izay fantatra amin'ny fisehoany amin'ny fantsona MrBeast ary mandray anjara amin'ireo fanamby amin'izany.
Chandler Hallow sy Jimmy 'MrBeast' Donaldson dia nihaona tamin'ny mpiara-miasa amin'i MrBeast, ilay voalohany dia lasa mpiambina talohan'ny nahasarika ny sainy ho an'ny toetrany hatsikana ary lasa mahazatra tao amin'ny fantsona MrBeast.
iza no mampiaraka Alexa bliss
Chandler Hallow dia lasa foto-tsakafatra rehefa misy ny fanamby amin'ny fantsona MrBeast ary saika tsy maharesy foana, na dia natolotra azy aza izany, izay no nahasarika ny sainy voalohany.
Vakio ihany koa: MrBeast Burger dia natomboka tamin'ny toerana 5 manerana ny UK, ary ny mpankafy Dream dia tsy mahazaka ny fientanam-pony
Nanao ahoana ny fiainan'i Chandler Hallow talohan'i MrBeast?
Chandler Hallow dia teraka tany Greenville, North Carolina, tamin'ny 3 Desambra 1998. Nianatra izy ary nahazo diplaoma tamin'ny JS Rose High School ary avy eo dia nahazo diplaoma avy amin'ny Chowan University any Murfreesboro. Tamin'ny taona 2018, tamin'ny taona nidirany tamin'i MrBeast, nanomboka nilalao basikety ho an'ny Chowan University Hawks i Chandler.
Tamin'ny taona 2018 Chandler dia nanao fisehoana kely tamin'ny iray tamin'ny lahatsarin'i MrBeast. Hatramin'ny nankafizan'ny mpijery azy dia nanomboka niseho tamin'izy ireo izy. Ankehitriny i Chandler dia manana ny fombam-burger azy manokana ao amin'ny menio MrBeast Burger.
Ohatrinona ny fomba chandler?
- TJ Grant (@ TJGrant11) 10 Mey 2021
Inona no lanjan'i Chandler Hallow?
Nandritra ny taona maro niseho tamin'ny fantsona MrBeast, Chandler dia nanangona vola mitentina 1 tapitrisa dolara, ary vonona hitombo hatrany satria izy izao manao ny varony manokana ary mitombo amin'ny famoronana atiny.
Raha mbola miara-miasa amin'i MrBeast i Chandler ary mamoaka ny anarany any, na amin'ny marika na ny fantsona vondrona misy azy rehetra, dia toa nanamafy ny toerany ho mpamorona atiny izy mandritra ny taona maro. Chandler dia nahazo laza teo amin'ireo mpankafy azy tamin'ny famerenany tamin'ny vola azony.
Vakio ihany koa: Iza moa i Tilly Whitfield? Big Brother fame dia nilaza fa ny hack hack hatsaran-tarehy DIY TikTok dia nampiditra azy tany amin'ny hopitaly
hulk hogan andre ilay goavambe
mia khalifa sy robert sandberg